Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2010 (4)
Q and A September 2010 (4)
1. I would like to know about the disease Fitsula
2. အသားပို ထွက်ရခြင်း အကြောင်း သိလိုပါတယ်
3. ဝက်တွေက ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်သေးလဲ
4. အခုအချိန်မှာ HIV ဆေး သောက်ဘို့ မလိုဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား
5. ကျွန်တော့် မိန်းမမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ လလောက် ရှိနေပါတယ်
7 Sep 10, 13:03
I would like to know about the disease of Fitsula. Does it need to cure urgently or not? Your urgent reply will be highly appreciated.
Fistula is called Fistula in ano or FIA. There is one more FIA which means fissure in ano. Both are diseases of the anal region. Fistula is worse than fissure.
Fistula is formation ofacanal between two different surfaces. In this case, one opening is on the skin beside the anus and the inner one opens into the rectum, the reservoir of stool.
The patient first hasasmall ulcer oraboil around the anus. It disappears and recurs. After months or years it spreads inside and reaches the rectum. The canal is formed. It won’t disappear with medical treatment and surgery is the treatment of choice. One may have more than one FIA.
This is just an urgent reply and if you need and if I have time then, I will write in Burmese soon.
Q: အသားပို ထွက်ရခြင်း အကြောင်း သိလိုပါတယ်။ ခု အသက် ၄ဝကျော်မှ နေရာ အချို့မှာ ထွက်လာပါတယ်၊ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာဝန်တယောက် က "ဝ" လာယင် ဖြစ်တတ်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရ မလဲ။ အန္တရာယ် ရှိ-မရှိ။ ထပ်တိုး မလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ခွဲစိတ်ပီး ကုပီးနောက်ပိုင်း ထပ်ဖြစ်နိုင်လား။ မခွဲပဲ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။
A: အသားပို ဖြစ်တဲ့နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ သိခြင်ပါသေးတယ်။ ရောဂါနာမည် အတိအကျ သိမှ ပြောလို့ ကောင်းမယ်။ မှန်းကြည့်ရတာတော့ Benign tumor ကင်ဆာ မဟုတ်တဲ့ အလုံး-အကြိတ် တမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့် Excision ခွဲထုတ်ရတာပါ။ ကြာနေရင် ပိုကြီးလာတာသာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Q: အသားပို ထွက်လာတဲ့ နေရာက ညာဘက် ဂျိုင်းမှာ တစ်ခု၊ ရင်ဘက်မှာ တစ်ခု၊ နဖူးမှာ တခု၊ လည်ပင်းမှာ သေးသေး လေးတွေ ၄ ခုလောက် ရှိနေတာပါ။ ဂျိုင်းက အသားပိုက နဲနဲ ကြီးတယ် (ခန့်မှန်း သံပုရာသီးအစေ့ လောက်)။ နာခြင်းတော့ မရှိပါ။ အသက်က ၄၃ နှစ် ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၇၅ ပေါင်၊ အရပ် ၅ပေ ၆လက်မ၊ BMI အရဆိုယင် ဝနေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်က သင်္ဘောသားပါ။ ဒီ September လ ကုန်လောက် ရန်ကုန်ပြန်ယင် ဘယ်ဆရာဝန် (ခွဲစိတ် အထူးကု or အရေပြားအထူးကု) နဲ့ ပြရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ် ရမလဲဆိုတာ ကိုလဲ ဖြေကြားပေးပါ။
အသားပိုလို့ ဆေးစာလိုမဟုတ်ဘဲ ခေါ်တာကို ရောဂါနာမယ် သိဘို့ လိုနေသေးတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ Lipoma အဆီကြိတ်၊ Cyst အဆီ-အရည်အိတ်၊ Wart ကြွက်နို့၊ Papilloma အသားပို၊ Enlarged lymph node တက်စေ့ကြီးခြင်း၊ Corn ငါးမျက်စိ (အသားမာ)၊ Mole မှဲ့၊ Skin cancer အရေပြားကင်ဆာ၊ စတာတွေဖြစ်တယ်။ ကြွက်နို့ နဲ့ မှဲ့ ကို တမျိုး ကုရတယ်။ ကင်ဆာကလွဲရင် ခွဲမှပျောက်တယ်။ ခွဲတာကို ခွဲစိတ်-အထူးကုသာမက ရိုးရိုး-ဆရာဝန်တွေကလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချုပ်ရိုး-အမာရွတ် လှချင်ရင် အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဆရာဝန်ဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ အရေပြားအထူးကု မလိုတတ်ပါ။ ခွဲပြီး ပြန်ဖြစ်တာထက် တနေရာမှာ အသစ်ဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မခွဲခင် မဆွပါနဲ့။ ဘာဆေးမှ မလိမ်းပါနဲ့။ စားပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေး ဆိုတာမျိုး ရှောင်ပါ။
6 Sep 10, 22:58
ဝက်တွေက ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်သေးလဲ ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြလို့ရရင် ရှင်းပြပေးပါ။
ဝက်တွေကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့ Aphthous fever (Foot-and-mouth disease) ကလေးတွေကို ကူးရင် ဆိုးတယ်။ Swine pox (Variola suilla) ဆိုးသည်။ သေစေနိုင်တယ်။ Swine erysipelas အနာ၊ Anthrax ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ Rabies ခွေးရူး၊ Actinomycosis အသားဆိပ်သင့်ခြင်း၊ Bacillus botulinus အသားဆိပ်သင့်ခြင်း၊ Balantidium coli ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ Helminths သံကောင်၊ Metagonimus ovatus သံကောင်၊ Strongyloides stercoralis သံကောင်၊ Metastrongylus elongates သံကောင်၊ Gnathostoma hispidum သံကောင်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မောင်လေးက အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို ပြကြည့်တော့ သူက အားဆေးဘဲ ပေးပါတယ်။ HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးကို မပေးသေးဘူး၊ ကိုယ်ခံအား ကောင်းနေသေးလို့ အဲဒီဆေးက သောက်ဘို့ မလိုသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ မောင်လေးကို ကြည့်ရတာလည်း ဝဝဖြိုးဖြိုးပါဘဲ။ အခုအချိန်မှာ HIV ဆေး သောက်ဘို့ မလိုဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ Thank you so much in advance.
HIV ပိုးရှိနေသူတွေ ဘယ်တော့ ဆေးသောက်ရမလဲ။
ကြွမ်းကျင်သူ အားလုံး သဘောတူထားတဲ့ အချက်ကတော့ CD4 cells တွေ ၂ဝဝ ထက် အောက်မကျခင် ဆေး ပေးသင့်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေက ၂ဝဝ နဲ့ ၅ဝဝ ကြားမှာ စပေးကြတယ်။ ဒီသတင်း အချက် အလက်က နိုင်ငံတကာကို ခြုံပြောတာပါ။ နေရာဒေသ အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
Sep 7, 2010 at 4:18 PM
ကျွန်တော့် မိန်းမမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ လလောက် ရှိနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာပြောတဲ့ Ovarian Cyst ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဆရာ။ ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဝမ်းဗိုက်အောက်နားမှာ အလုံးတစ်လုံး တွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ Ultrasound ရိုက်ကြည့်တော့ 7.7 x 3.8 လောက်ရှိတယ် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်ချစ်သူ အရမ်းကံဆိုးပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော့် ရင်သွေးလေးကော၊ ချစ်သူကိုရော safe ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပါအုံး ဆရာ။ အဲဒီနှစ်ခု ဖြစ်နေတာကြောင့် ဘယ်လို နေထိုင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုကုရမလဲ ပြောပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် -
Ovarian cyst နဲ့ ကိုယ်ဝန်တွဲနေတာဆိုရင် Cyst ကို အသေအခြာ ကြည့်ရမယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကတည်းက ရှိနေတာလည်း။ မွေးပြီးအောင် စောင့်ရင် မရဘူးလား။ ဖြေးဖြေး ကြီးတာမျိုးဆိုရင် စောင့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ကြီးနှုံး အတော် နှေးပါတယ်။ သားအိမ်နဲ့ မွေးလမ်းကို ဖိနေ-ပိတ်နေသသလား။ မဖိရင်-မပိတ်ရင် မွေးပြီးမှ အဲဒါကို ကုမယ်။ မွေးလမ်းကို ဖိ-ပိတ်နေအုံးတော့ ၉ လကိုယ်ဝန်အထိ သားအိမ်ကိုဖိတာ ခံနိုင်ရင် ခွဲမွေးနိုင်သေးတယ်။ Physical disturbance ရုပ်ပိုင်း-အစိုင်အခဲတခု အနေနဲ့သာ ပြဿနာပေးနေတာပါ။ သူရှိနေလို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ သန္ခေကို တခြား ရောဂါတွေလို သက်ရောက်မှု၊ ကူးစက်မှု လုံးဝမရှိပါ။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:11 PM